1 Samuel 24 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
24 O wee ruo na, ngwa ngwa Sọl si n’ịchụ ndị Filistia ọsọ lọta,+ ha bịara kọọrọ ya, sị: “Lee! Devid nọ n’ala ịkpa En-gidaị.”+ 2 Sọl wee kpọrọ puku ndị ikom atọ a họrọ ahọ+ n’Izrel dum wee gaa ịchọ Devid+ na ndị ikom ya n’elu oké nkume ewu ọhịa.+ 3 E mesịa, ọ bịara n’ogige atụrụ e ji nkume gbaa nke dị n’akụkụ ụzọ, n’ebe ọgba dị. Sọl wee bata ịga mposi,+ ka Devid na ndị ikom ya nọ ọdụ n’ime ime n’ọgba ahụ.+ 4 Ndị ikom Devid wee malite ịsị ya: “Taa bụ ụbọchị Jehova na-asị gị, ‘Lee! M na-enyefe onye iro gị n’aka gị,+ ị ga-emekwa ya ihe ọ bụla dị gị mma.’”+ Devid wee bilie jiri nwayọọ bekara ala ala uwe elu na-enweghị aka nke Sọl yi. 5 Ma o ruru na mgbe e mesịrị, obi Devid nọ na-apịa ya ụtarị+ n’ihi na o bekaara ala ala uwe elu na-enweghị aka nke Sọl yi. 6 N’ihi ya, ọ sịrị ndị ikom ya: “Tụfịakwa! Dị ka Jehova si ele ihe anya, agaghị m eme onyenwe m ihe a, bụ́ onye Jehova tere mmanụ,+ site n’isetị aka m metụ ya, n’ihi na ọ bụ onye Jehova tere mmanụ.”+ 7 Devid wee jiri okwu a mee ka ndị ikom ya laghachi azụ, o kweghịkwa ka ha mee Sọl ihe.+ Ma Sọl si n’ọgba ahụ bilie wee gawa ebe ọ na-aga. 8 Mgbe e mesịrị, Devid biliri si n’ọgba ahụ pụọ wee kpọọ Sọl, sị: “Onyenwe m+ eze!” Sọl wee lee anya n’azụ, Devid wee hulata kpọọrọ ya isiala.+ 9 Devid wee sị Sọl: “Gịnị mere i ji ege ntị n’ihe ndị mmadụ na-ekwu,+ sị, ‘Lee! Devid na-achọ imerụ gị ahụ́’? 10 Lee, anya gị ahụwo taa otú Jehova si nyefee gị n’aka m taa n’ime ọgba; otu onye wee sị ka e gbuo+ gị, ma m meere gị ebere wee sị, ‘agaghị m esetị aka m metụ onyenwe m, n’ihi na ọ bụ onye Jehova tere mmanụ.’+ 11 Nna m,+ lee, ee, lee ala ala uwe elu gị na-enweghị aka m ji, n’ihi na mgbe m bekaara ala ala uwe elu gị na-enweghị aka, egbughị m gị. Mara, hụkwa na ọ dịghị ihe ọjọọ+ m mere, enupụghịkwa m isi, emehieghịkwa m gị, ma gị onwe gị na-echechi mkpụrụ obi m ka i bipụ ya.+ 12 Ka Jehova kpee ikpe n’etiti mụ na gị;+ Jehova ga-abọrọ m ọbọ+ n’ahụ́ gị, ma aka m agaghị emetụ gị.+ 13 Dị nnọọ ka ilu ndị oge ochie na-asị, ‘N’aka ndị ajọ omume ka ajọ omume ga-esi apụta,’+ ma aka m agaghị emetụ gị. 14 Ònye ka eze Izrel na-achụ? Ònye ka ị na-achụ ọsọ? Ọ̀ bụ nkịta nwụrụ anwụ?+ Ọ̀ bụ àkpịrị́?+ 15 Jehova ga-abụ onyeikpe, ọ ga-ekpekwa ikpe n’etiti mụ na gị, ọ ga-ahụ, ọ ga-ekpere m ikpe+ ma kpepụta m n’aka gị.” 16 O wee ruo na mgbe Devid gwasịrị Sọl okwu ndị a, Sọl sịrị: “Devid nwa m, ọ̀ bụ olu gị bụ ihe a?”+ Sọl wee kwaa ákwá n’olu dara ụda.+ 17 O wee gaa n’ihu ịsị Devid: “Ị bụ onye ezi omume karịa m,+ n’ihi na ọ bụ gị meere m ihe ọma,+ ma mụ onwe m mere gị ihe ọjọọ. 18 Taa, gị onwe gị ekwuwo ihe ọma i meere m ebe ọ bụ na Jehova nyefere m n’aka gị+ ma i gbughị m. 19 Ọ bụrụ na mmadụ ahụ onye iro ya, ọ̀ ga-ezi ya ụzọ dị mma ọ ga-esi gbalaga?+ Ya mere, Jehova ga-eji ihe ọma kwụọ gị ụgwọ,+ n’ihi na i meere m ihe ọma taa. 20 Lee! M maara nke ọma na ị ga-abụrịrị eze,+ na ọ bụkwa n’aka gị ka alaeze Izrel ga-adịgide. 21 Ugbu a, jiri Jehova ṅụọrọ m iyi+ na ị gaghị ebipụ mkpụrụ m nke ga-anọchi m, na ị gaghịkwa ekpochapụ aha m n’ụlọ nna m.”+ 22 Devid wee ṅụọrọ Sọl iyi, e mesịa, Sọl lara n’ụlọ ya.+ Ma Devid na ndị ikom ya gbagoro n’ebe siri ike mbanye.+